Tononkira 1: 1-17
Tononkira 1 Tononkira 2
Enga anie ka hanoroka ahy amin'ny fanorohan'ny vavany izy! Fa tsara noho ny divay ny fitiavanao.
Aza mibanjina ahy, fa mivalomainty aho, Satria efa azon'ny hainandro; Tezitra tamiko ny zanak'ineny; Notendreny ho mpiandry ny tanimboalobony aho; Nefa ny tanimboaloboko kosa, dia ny an'ny tenako, tsy mba nandrasako.
Lazao amiko, ry ilay tian'ny fanahiko izay iandrasanao ny ondrinao, Sy izay ampandrianao azy raha antoandro; Fa nahoana no ho tahaka izay mivezivezy foana aho Eny amin'ny andian'ny namanao ?
Raha tsy fantatrao, ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy, Dia mandehana hanaraka ny andian'ny ondry aman-osy, Ary andraso eny amin'ny lain'ny mpiandry ondry ny zanak'osinao.
Ry tompokovavy havako, hianao dia ampitahaiko Amin'ny soavalivaviko mitarika ny kalesin'i Farao.
Indro, tsara tarehy hianao, ry tompokovavy havako; Indro, tsara tarehy hianao; Voromailala ny masonao.
Indro, tsara tarehy hianao, ry malalako Eny, mahafinaritra; Maitso ny fandriantsika.